Izindaba - Ukukhethwa kwezihlungi zomoya ezihlukile ezifakwe othulini lwamahhala
Ukukhethwa kwezihlungi zomoya ezahlukahlukene ezifakwe othulini lwamahhala
Amaphuzu abalulekile wokuhlelwa:
Isihlungi se-Sub singasetshenziswa esikhundleni sesihlungi sokwelashwa kokuhlanzwa komoya kwebanga lama-300000;
2. Izihlungi zamabanga aphansi, eziphakathi neziphakeme kufanele zisetshenziselwe ukwelashwa kokuhlanzwa komoya ngenhlanzeko yomoya yamazinga ayi-100, 10000 no-100000;
3. Ukusebenza okulingene noma isihlungi somoya kufanele kukhethwe ngokuya ngaphansi noma ngokulingana nomthamo womoya olinganisiwe;
4. Isihlungi somoya esisebenza kahle ngokwanele kufanele sibekwe esigabeni sengcindezi esihle somoya opholile;
5. Noma isihlungi somoya esincane kufanele sisethwe ekugcineni kohlelo lokuhlanza umoya oluhlanzekile.
Ukuhlaziywa kobubanzi besicelo sombhoshongo owenziwe nge-carbon adsorption ekwelashweni kwegesi kadoti
Imishini yokwelashwa kwegesi yemfucumfucu icushiwe uhlelo lwe-tower adsorption tower luphelele, imishini yokusiza iphelele, ukusebenza kahle kokuhlanzwa kuphezulu. It is kabanzi petroleum, amakhemikhali, upende, ukuphrinta, iraba, upende nezinye izimboni. I-Benzene nenye igesi yemfucuza engokwemvelo ingahlanzwa kulezi zimboni. Ingakwazi ukuhlanza imvelo ngempumelelo, isuse ukungcoliswa komhlaba, ithuthukise izimo zokusebenza, iqinisekise impilo yabasebenzi, ithole izincibilikisi eziphilayo futhi inciphise nezindleko zokukhiqiza.
Kuvuselelwe umbhoshongo we-carbon adsorption unezinzuzo zokuphathwa nokugcinwa okulula, ukwakheka okuhlanganisiwe, indawo encane yaphansi nokusebenza okuphephile.
Kuvulwe umbhoshongo we-carbon adsorption ngumkhiqizo owenziwe ngezifiso. Imingcele yobuchwepheshe izonikezwa futhi yenziwe ngezifiso ngokuya ngamapharamitha wangempela.
Izinzuzo zombhoshongo we-carbon adsorption ocushiwe
(1) Ukusebenza kahle kwe-adsorption ephezulu, umthamo omkhulu we-adsorption nohlu olubanzi lokufaka isicelo;
(2) Ukugcinwa okulula, azikho izidingo zobuchwepheshe;
(3) Inendawo enkulu ethile yendawo kanye nokukhishwa kwe-adsorption okuhle okukhethiwe, futhi ingaphatha zonke izinhlobo zerhasi exubekile ngesikhathi esisodwa.
(4) Ikhabhoni eyenziwe yasebenza inezici zomthombo obanzi nentengo ephansi.
Inhloso nendlela yokuphathwa kwendle
Inhloso yokwelashwa kwamanzi angcolile ukuhlukanisa ukungcola emanzini angcolile ngenye indlela, noma ukubola kube yizinto ezingenabungozi futhi ezizinzile, ukuze amanzi angcolile ahlanzeke. Ngokuvamile, kuyadingeka ukuvimbela ukutheleleka kobuthi namagciwane; Gwema izinto ezibonakalayo ezinephunga elingajwayelekile kanye nokuzonda ukuhlangabezana nezidingo zokusetshenziswa okuhlukile.
1) Indle elula (COD <300): ngokwesibonelo, indle yasekhaya, indle kamasipala, ikakhulukazi isebenzisa indlela ye-aerobic biochemical, ne-aerobic biochemical njengobuchwepheshe obuphambili, obuhlukaniswe yaba yindle yasebenza nendlela ye-biofilm. Kubandakanya izinqubo eziningi zokuphathwa kwendle, njengethangi elijwayelekile lokugeleza kwepulagi, i-SBR, umsele we-oxidation, i-oxidation yokuxhumana ne-MBR. Idizayini, ukwakhiwa nokusebenza konke kusekelwe kulesi sakhiwo.
2) Indle yokuhlushwa ephakeme kancane (i-cod300 ~ 800): isibonelo, indle ephezulu yasekhaya kanye namanzi angcolile ezimboni zikamasipala, ubuchwepheshe obuthile be-anaerobic biochemical bufakwa esigabeni esingaphambili sendlela ye-aerobic biochemical, ehlukaniswe inqubo ye-anaerobic kanye nenqubo ye-hydrolysis acidification. Njengokusetshenziswa kwethangi elijwayelekile le-anaerobic, ithangi le-hydrolysis acidification. Lokhu futhi kuyingxenye ebalulekile yokwakhiwa nokusebenza kwesakhiwo. Noma inqubo yokuhlanganisa i-anaerobic (hydrolysis), engasusa i-nitrogen ne-phosphorus, njenge-Ao, A2O, CASS, umsele we-Carrousel oxidation njalonjalo.
3) Akunandaba ukuthi ukugxilwa kuphakeme kangakanani (cod800 ~ 2000): lolu hlobo lwamanzi kamasipala luyivelakancane, ikakhulukazi emkhakheni wamanzi angcolile angaphansi kwezimboni. Inqubo ye-coagulation sedimentation ivame ukusetshenziselwa ukwelashwa kwangaphambili, futhi inqubo ye-anaerobic biochemical ivame ukusetshenziswa lapha, njenge-UASB, ABR, EGSB ne-IC; Ukungcola kwe-Anaerobic bese kuphathwa ngenqubo ye-aerobic.
4) Amanzi angcolile anokuhlushwa okuphezulu (i-cod2000 ~) imvamisa amanzi angcolile anezinto ezingcolisayo ezikhishwa efektri, ezidinga ukwelashwa ngendlela ye-physicochemical. Izici ezingcolisa amanzi angcolile ziyalashwa ukuze zingene kwinqubo elandelayo yokuhlanzwa kwamanzi amdaka ngaphandle kokuthinta umsebenzi olandelayo webhayoloji nokukhula kokuzala.